Madaxwaynaha Somaliland oo hanneeyay Musharraxnimadii KULMYE, Sababaha Is-casilaaddii Wasiirrada oo Tanaasulkiisa ka kacday & Xog-waranka Xirsi | Saxil News Network
Madaxwaynaha Somaliland oo hanneeyay Musharraxnimadii KULMYE, Sababaha Is-casilaaddii Wasiirrada oo Tanaasulkiisa ka kacday & Xog-waranka Xirsi
Hargeysa, 3 November, 2015-(Saxilnews.com)- Madaxwaynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa ka tanaasulay Musharraxnimadii Madaxwaynaha ee uu hore u sheegay inuu u taagan yahay si uu uga qayb-galo doorashada Madaxtooyada ee loo muddeeyay bisha 3aad ee Sannadka 2017-ka.
Sidaana waxa Sheegay Wasiirkii hore ee Wasaaradda Madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ka mid ahaa 14 Masuul oo toddobaadkii hore iska casilay xilalkii ay hayeen Xukuumadda Madaxweyne Axmed-Siilaanyo. Xirsi oo Shalay ka hadlayey Munaasibad Isbahaysiga Musharraxiinta KULMIYE ku qaaddaceen Guddi uu Madaxwaynuhu u saaray xallinta Khilaafka labada Garab u qaybiyey Xisbiga KULMIYE, ayaa sheegay inuu is casilay ka dib markii ay Madaxweynaha isku aragti ka noqon waayeen cidda dalka hoggaaminaysa Mustaqbalka maaddaama oo buu yidhi; ‘aanu isagu Musharrax ahayn oo uu tanaasulay’.
Xirsi oo sababaynaya Is-casilaadda Isaga iyo Wasiirrada kale waxa ku kallifay, waxa uu yidhi; “Xilka waxaannu ka tagnay annaga oo xor ah aan cidna na khasbaynin, waxaanu xilka ka dooranay qadiyadda, rabitaanka iyo Damiirkayagu wuxuu doonayo oo ah waxa loo siman yahay oo caddaalad ah oo loo tartamo ee aanu jujuub ku iman. Waxaanu xilka uga tagnay inaanu qiimayno Xisbinimada ee aanaan qiimayn Qabyaaladda iyo qoloqolada iyo Reer Hebel u daayada. Waxa qiimo nala leh Qarannimada ee Qoloqoladu Qiimo nalama laha, waxa Qiimo nala leh Xisbinimada ee koox kooxdu qiimo nalama leh, markaa waxaanu xilka waxaanu u tagnay waa aragtidaa.”
Mr. Xirsi waxa uu intaas ku daray oo yidhi; “Mudadii aan Xukuumadda joogay ee aan Madaxweynaha la shaqeynayey oo lix sanadood ku dhow ee lagu xaman jiray inaan xilka ugu dhow hayo gacantiisa midigna ahay ee laga yaabo in qolo ahaan la xijiyo marka Soomaalidu qabyaaladda deyn waydo, waxaan qaatey go’aanka ah dariiqaa Xisbiga ku socdo Mustaqbalka oo ah inuu qaybsamo oo aanay soconin dimuqraadiyad iyo tartan xalaal ahi inaan diido oo aan idhaahdo suurtagal maaha oo aan aragtideyda ka jawaabo..Xaasha.”ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray oo uu difaacay Masuuliyiinta uu Madaxwaynuhu ku beddelay iyagga , “Haddaanu xilka ka tagnay Geesiyaal na beddeli kara way badan yihiin, Xukuumadduna waa Xukuumad gaamurtay oo aanu shan sanadood soo dhisaynay oo mushiladi ma haysato, ee kuwa is leh waxtarow ha caayina annagu caayi mayno’e.”
“Haddii adiga iyo Madaxweynahaagu isku siyaasad noqon waydaan oo aad aragtida ku midoobi waydaan waa inaad iskaga tagto ama uu isagu kaa kaxeeyo.” ayuu yidhi, waxaanu intaa sii raaciyey oo uu sheegay in Madaxwaynuhu ka hadhay doorashada, waxaanu yidhi; “Haddii aanu Madaxwaynaha ka mideysnayn intii aanu ku soo jirnay dhismaha Qaranimada iyo Xisbiga, balse uu Maanta ka hadhay doorashadii oo aanaan ka mideysnayn Mustaqbalka yaa Hoggaaminaya dalka, shakise kuma jiro haddii Madaxwaynuhu doonayo inuu tartamo inaanu 10 iyo 15 ba tuurta ku qaadi lahayn oo aanu u shaqeyn lahayn oo aanu ku tabci lahayn inaanu gaadhsiino, haddiise aanu ku kala aragti noqonay qariib maaha.